Isikrini original (ukubonisa), uphiko tablet ababonisa lwati. Quality BlackBerry.
original Isikrini ithebhulethi BlackBerry Playbook — ingxenye ukuthi ubonisa ulwazi. Washayela ukubonisa (ukubonisa), kusukela English "isibonisi".
BlackBerry — ukubonisa esinye sezici ezibalulekile tablet BlackBerry, futhi, ngeshwa, asikwazi lilungiswe uma kwenzeka iphutha. Uma wakho esikrinini Playbook uqhekeko, noma wagcwala liquid, noma nje "yenkinga" futhi imibukiso amakhaladi amabala noma umfanekiso elimhlophe, owukuphela kungenzeka ikhambi — ukuphindisela LCD screen. BlackBerry Playbook Ubuye touch screen , kanye nomthelela ngokomzimba ngokuvamile ezilimele zombili lezi zici. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana lilungisa screen ungakwazi ukufunda ekhasini Ukubuyiselwa LCD Screen.
Bheka futhi: LCD screen ne umhlangano touch screen, kanye usebe for BlackBerry Playbook.
Screen Izici Playbook BlackBerry:
7.0 Ovundlile ye-intshi
Ukubukeka kwesilinganiselo 16: 9
I pixel kwabantu 170 ye-intshi ngayinye
Sicela uqaphele ukuthi zesikrini ezinguqulweni ezahlukahlukene Playbook (Wi-Fi, 3G / 4G) ahambisanayo. Uma unemibuzo, sicela uxhumane uchwepheshe wethu.
Lena spare okuyingxenye original, a screen enjalo efakwe kule inhlangano yabantwana Playbook. Qaphela, emakethe ukusabalala screen amakhophi ezibonisa ukhwaliti ongaphakeme build, umbala abampofu, nika umehluko ongaphakeme, lesinqumo ongaphakeme, mancane ukwedlula original. Musa skimp esibukweni, ngoba usebenza naye ngaso sonke isikhathi!
LCD screen for BlackBerry Playbook, Black, ngoba 3G / 4G-version PBLCD-3G ●
LCD screen for BlackBerry Playbook, Black, i-Wi-Fi-version PBLCD-WIFI ●
Black, ngoba 3G / 4G-version PBLCD-3G
Black, i-Wi-Fi-version PBLCD-WIFI